Kubatana neMhuka muwiricheya | Karman® Mawiricheya
Inofungidzirwa Kuverenga Nguva: 5 maminitsi
Is zvinogoneka kuva nehukama ne mhuka muwiricheya? Mhuka mukati mavhiripu iri kuve iri kuramba ichizivikanwa pfungwa. Ikozvino kune zviitiko zvembudzi, hwai, nguruve, tsuro, mini bhiza, uye kunyangwe mhumhi uye inovhara pamakumbo.
Akaremara mhuka dzinoda mavhiripu kana imwe mhando ye kufamba zvishandiso zvinoita kuti vakwanise kufamba zviri kuva chinhu chitsva standard.
Uyezve, mhuka inogona kuiswa pasi kuipa kana chirwere chinozovatungamira kune a wiricheya.
A wiricheya aibvumira mhuka nakidzwa neupenyu uye kuva nazvo hupenyu ine yakazvimirira kufamba.
Kutsvaga Mawiricheya kune yako Pet
Zita rakakurumbira rinouya mupfungwa kana uchikurukura mhuka mukati mavhiripu Walkin 'mavhiri.
Imbwa yeAmerica imbwa mavhiripu kukosha kwekucherechedza kwakagadzirwa naMark C. Robinson kubva kuna Walkin 'Pets neHandicappedPets.com iri muNashua, New Hampshire.
Walkin Zvipfuwo zvinotarisawo mu kufamba zvishandiso zvemarudzi ese akakuvara, Akaremara, uye zvipfuwo zvekukwegura.
Walkin 'Zvipfuwo mawiricheya inobatsira imbwa dzakura. Izvi ndezvekuona kuti chipfuwo chako chawana iyo kusimbisa muviri dzinoda uye dzinogona nakidzwa neupenyu nerusununguko uye pasina chekudzosera shure.
Unofanirwa Kufunga nezveKutora Mhuka Yako a wiricheya?
Inokurudzirwa kuti uwane imbwa yako kana katsi mune wiricheya kana ivo vari kudonha, kurasikirwa neyakaenzana, kana kuneta nyore.
Uyezve, ichokwadi kuti vazhinji zvipfuyo zvewiricheya vakaoma mitezo kana kuti vakarwadziwa zvikuru kuipa. Asi, handizvo nemhuka dzose.
Uyezve, akawanda mhuka mu wheel chair vachiri kugona kufamba pane vamwe its its limbs. Ivo vanogona kunyange kukwanisa kumira vega. Iwo maWalkin 'mavhiri anogona zvinopa rutsigiro urwo rwunobvumidza mhuka yako kumira yakatwasuka neyakafanira mamiriro.
Vanogona kubatsirwa ne wiricheya, zvisinei kana vachigoneswa vasina kana kwete.
Kukwegura kunogona kukonzera imbwa nezvimwe zvipfuwo kuneta nyore pakufamba kwenguva refu. Zvirwere zvakaita seArthritis kana hudyu dysplasia zvinogona kukonzera maronda majoini anozoita mavhiripu inobatsira zvikuru. Iyo wiricheya inotsigira mitezo yavo inobvisa kunetseka pamajoini avo. Zvinoita kuti kufamba kuve nyore kumhuka. Ungangoda kufunga nezve lightweight wiricheya.
Zvezvipfuyo zvinopora kubva kuipa kana kuvhiyiwa, iwo maWalkin 'mavhiri anogona kuvabatsira kuti vadzokere netsoka nekukurumidza. Wiricheya inogona kuve yekuwedzera kukuru kune yako imbwa chirongwa chekuvandudza! Zvakafanana nezvinhu zvakawanda mu upenyu, nekukurumidza zviri nani. Kuzviita izvozvi nekutsanya kwakanaka.
Benefits of Animals In mavhiripu
mavhiripu kubatsira mhuka kubata ne:
Intervertebral disc chirwere
Kuvandudza Balance uye Kugadzikana
Vanofamba nemabvi vanogovana mavhiri akafanana neyawiricheya imbwa
Imwe yeakakosha kwazvo Benefits ye wiricheya iri kukura kwehutano hwepfungwa hwemhuka. Varidzi vakachema nekufara mushure mekunge vaona mutsauko mumaitiro echipfuwo chavo mushure mekunge vaona kuti vanogona kufamba, kumhanya, uye kutamba vega zvakare.
Maitiro Ekusarudza Iyo Chairo Wiricheya
Ita shuwa kuti iwe unosarudza chaiyo ngoro uye wiricheya saizi yembwa yako. Kuita sarudzo yakadaro kunogona kukurira.
Nhanho yekutanga kuona kana mhuka yako iri mumiriri akanaka kune wiricheya.
Sarudza danho rekutsigira chako chipfuwo zvinodiwa
Zvichienderana nechipfuwo chako 'mamiriro uye kufamba zvavanoda, vanogona inoda akasiyana mazinga ekutsigira.
Shure Rutsigiro vs. Rutsigiro Ruzere wiricheya
Sokutsigira shure mavhiripu
shure tsigira mawiricheya dzakanakira mhuka dzinovaraidza idzo dzine huremu hwemakumbo ekumashure, kuipa, kana kuoma mitezo. Vanotsigira chipfuwo chako kubva pasi uye kupa bharanzi uye kugadzikana. Izvi zvinobvumira mhuka yako kuti igone kumira, kufamba, kumhanya, uye kutamba zvakare.
Zvipfuwo zvakaremara zvachose mumakumbo avo ekumashure zvinogona kushandisa zvinokatyamadza mu mavhiripu kusimudza matako avo ekumashure zvakachengeteka pasi. Izvi zvinodzivirira kuipa zvinokonzerwa nekukwasva kana kukweva tsoka.
Rutsigiro Ruzere wiricheya
Tsigiro izere wiricheya ndiyo mwero mana-vhiri kana quad wiricheya.
Izvo zvakakwana kune zvipfuwo zviri kusangana nemitezo isina kusimba mukati memaviri kumberi nekumashure makumbo. Makumbo ako epamberi epamberi anofanirwa kuve akasimba zvakakwana kutyaira uye kuendesa rutsigiro ruzere wiricheya.
Rutsigiro Ruzere wiricheya iri sarudzo hombe yezvipfuyo zvine chirwere chiri kufambira mberi senge Degenerative Myelopathy (DM) iyo inokonzeresa kuti zviratidzo zviwedzere nekufamba kwenguva.
Maitiro ekugadzirisa kune upenyu pa Mawiricheya
Shanduko mu wiricheya zvinogona kuve nyore kune dzakawanda dzinovaraidza. Imbwa uye mhuka zhinji dzinofarira kufamba, uye dzinodzidza nekukurumidza kuti yavo wiricheya ichavabatsira nazvo. Kunyangwe mhuka dzisina kumhanya kana kufamba mazera dzinofara kuti dzidzokere netsoka dzadzo ne mavhiripu. Ivo vanochinja zvakanyanya nekukurumidza. Iko kushanduka kunoshamisa. Uye vanotaridzika kunge vanoyevedza uye vanofara nekukwanisa kumhanya zvakare.
Kana chipfuwo chako chikasatanga kumhanya ipapo, iyo wiricheya ingangoda zvigadziriso zvidiki kuti zviwedzere kugadzikana. Nema tweaks mashoma uye zvimwe zvinokurudzira kubva kwauri, chipfuwo chako chinenge chichifamba uchimhanya pasina nguva!
Mhuka dziri mavhiripu inogona kuuya nevakawanda Benefits. Izvi zvinosanganisira iyo kugona kuti vafambe futi pane yavo yega steam, iyo yaizounza kukurira kukuru kwepamoyo kune iyo mhuka. Pakupedzisira, zvichaita kuvandudza zvakanyanya ari unhu yehupenyu hwavo newavo muridzi.
Wiricheya haisi yevanhu chete
kupinda Izvi re muna Mawiricheya asingaremi, hwiricheya, Wiricheya Nhau, kufamba newiricheya uye tagged isina kurema wheelchair, kufamba, anogara pazvigaro, wiricheya, nhau dzewiricheya, mavhiripu.